🌟သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် နဲ့ သရဲခြောက်တဲ့ ကုတင် 🌟
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂျော်လဒို ခရိုင်မှာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ညီအစ် ကိုတွေလို ရင်နှီးချစ်ခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စု ရှိတယ်။
သူတို့ဟာ တစ်ရပ်ကွက်တည်းမှာ ကြီးပြင်းလာပြီး ကျောင်းတက်တော့လည်း တစ်ကျောင်းတည်းသာရှိတဲ့ တောမြို့လေးမို့ အားလုံး အတူတူ...။
ပြောမနာ ဆိုမနာ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့..။
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ကြိုက်ပြီဆို ကျန်တဲ့သူ တွေ က ဝိုင်းကူညီကြ။
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ရင် ကျန်သူငယ်ချင်းတွေက ကြားထဲက ဝိုင်းဖြန်ဖြေကြ...။
သူတို့အားလုံး အထက်တန်း ၊ တက္ကသိုလ်အထိ မခွဲ တတွဲတွဲ...။
သူတို့ရဲ့ နက်နဲတဲ့ ခင်မင်မှုတွေကြားကို လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု ရောက်လာတယ်။ အဲဒီ လျှို့ဝှက်ချက်ကြောင့်ပဲ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်ဝမ်းကွဲကုန်ကြတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် ၈ လပိုင်းပေါ့။
အဲဒီ လျှို ့ဝှက်ချက်ဟာ အင်မ် ရဲ့ ကုတင်ပေါ်က မွေ့ယာက အနံ ့ဆိုးကြီးက စတင်ခဲ့ တယ်။
ပိုပြီး ခြောက်ခြားဖို့ကောင်းတာက အင်မ် ရဲ့ မွေ့ယာပေါ်မှာ အိပ်မိရင် သရဲခြောက်ခံရတယ်ဆိုတာပဲ...။
သရဲ စ ခြောက်ပြီဆို အနံ့တွေက ပိုပြီး လှှိုင်တက်လာတယ်။
သရဲက ရှပ်အကျႌ အဖြူ လက်ရှည် ဝတ်ထားတဲ့ သန်သန်မာမာ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်။
ပထမတော့ ဦးလေးကြီးဟာ အရှေ့မှာ ဘွားကနဲ ပေါ်လာပြီး ကျောခိုင်းထိုင်နေတယ်။
ပြီးတော့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက လှည့်လာပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်နေသူကို စိုက်ကြည့်တော့တယ်။
သရဲ ဦးလေးကြီးဟာ ဆံပင်တိုတို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ညှပ်ထားတယ်။ ဦးလေးကြီးမျက်နှာက အံကြိတ်ပြီး ဒေါသထွက်နေတယ်။
အိပ်မက်လိုလို တစ်ကယ်လိုလို...။ ဦးလေးကြီးရဲ့ မျက်နှာဟာ သိသာထင်ရှားလွန်းလို့ စိတ်ထဲ စွဲနေအောင် မှတ်မိသွားကြတယ်။
သရဲ ဦးလေးကြီးရဲ့ အကြည့်ခံရတဲ့ သူတွေဟာ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ အလွန်မြန်လာတယ်။
ရေငတ်ပြီး ရင်ဘတ်တွေ အောင့်လာတယ်။ လက်တွေ ၊ ခြေတွေ ကုတင်မှာ မြဲမြံစွာ ကပ်နေတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး လှှုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ချွေးစီးတွေ ထွက်လာတယ်။
သရဲ ဦးလေးကြီးက သူ့အကြည့်ကို ဖယ်လိုက်မှ သရဲအခြောက်ခံရသူဟာ ဝူးဝူးဝါးဝါး အော်နိုင်ပြီး ထ ထိုင်နိုင်တယ်။ သူတို့ဟာ အလွန်ကြောက်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
ထူးဆန်းတာက သူငယ်ချင်းတွေ သရဲခြောက်ခံရတဲ့ ပုံစံကလည်း အားလုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ်..။
အင်မ် ရဲ့ ရည်းစားလည်း အင်မ် ရဲ့ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်ပျော်သွားပြီး သရဲအခြောက်ခံရတယ်။ အတူတူပဲ...ဆံပင်တိုတို သရဲ ဦးလေးကြီး။
ဒီလို လူတွေ သရဲအခြောက်ခံရပေမဲ့ သရဲကို အင်မ် က တော့ မကြောက်ဘူး။
"ငါက သရဲကို ကြောက်မှ မကြောက်တာကွ။ သရဲက ငါ့ကို မကျေနပ်ဘူး။ "
ပြီးတော့ အင်မ် က ထပ်ပြောပြတယ်။
"မင်းတို့ ဘာလို့ သရဲ အခြောက်ခံရသလဲ ဆိုတာ ငါ သိတယ်ကွ... ဒါ လျှို ့ဝှက်ချက်ပဲ။ မင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘူးလို့ ကတိပေး.."
အင်မ် ဟာ ဒီ လျှို ့ဝှက်ချက်ကို သူငယ်ချင်း အားလုံး စုထိုင်ပြီး တစ် ပြိုင်နက်ပြောပြတာတော့ မဟုတ်ဘူး။
တစ်ဦးချင်းစီ .. ဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောဖို့ အတန်တန် ကတိတောင်းပြီး ပြောပြတယ်။
ဒီအကြောင်း မ ပြောပြခင် မွေ့ယာနဲ့ ကုတင်ကြားက သေတ္တာပါးလေး တစ်ခုကို ထုတ်ပြတယ်။
သေတ္တာကို ဖွင့်လိုက်တော့ သွေးစွန်းနေတဲ့ ဓားတစ်လက်။ သွေးပုပ် တွေကြောင့် အနံ့က တော်တော်ဆိုးတယ်။
" ဟိုကောင် ကင်မ် သိတယ်မဟုတ်လား။ ဒီကောင် ယတ်ချွန်း လမ်း ၅ ဆုံ ဖက်မှာ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာဆီက ငွေလု ဓားပြတိုက်ပြီး ဓားနဲ့ထိုးသတ်ခဲ့တာ ။ ပြီးတော့ ကြောက်ပြီး ငါ့အိမ်မှာ တစ်ပါတ်ပုန်းနေတယ်။ ဓားကို ဒီမှာထားသွားပြီး ဖျောက်ဖျက်ပေးဘို့ ပြောသွားတယ်။ ငါလည်း ဖျောက်ဖျက်လိုက်မှ သူ မိသွားမှာစိုးလို့ ဘယ်မှာ လွှင့်ပစ်ရမလဲ မသိသေးလို့ "
အင်မ် ရည်းစားဆို အရမ်းကြောက်သွားပြီ အင်မ် ရဲ့အိမ်ကိုတောင် မလာရဲတော့ဘူး။
ကင်မ် က တော့ ဘယ်သူ့ကို မှ ဒီအကြောင်းမပြောဘူး။
အင်မ် က ပဲ ပြောနေတာဖြစ်တယ်။
ရက် အနည်းငယ်ကြာတော့ ဂျော်လဒို မှာ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာ ဓားနဲ့ အထိုးခံရတဲ့ သတင်းက တစ်ကယ်ပဲ သတင်းစာထဲပါလာတယ်။
နေရာကလည်း အင်ပြောတဲ့ ယတ်ချွန်း လမ်း ၅ ဆုံ ..တဲ့။
တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာရဲ့ ရုပ်ပုံက အင်မ် နဲ့ ကင်မ် ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ခြောက်တဲ့ သရဲကြီး ...။
သရဲဦးလေးကြီး မှ သရဲ ဦးလေးကြီး စစ်စစ်..။
ဒါပေမဲ့ သတင်းထဲမှာ တရားခံ လူသတ်သမားက အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ်ရှိတဲ့ ကောင်လေးလို့ ရေးထားတယ်။
အင်မ် ရဲ့ ရည်းစားနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ တွေဝေသွားကြတာပေါ့။
အင်မ် က လျှောက် လိမ်ပြောနေတာလား?
သရဲ က တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းဆိုတော့ အင်မ် ပြောတာ အမှန်တွေလား..?
ဒါဆို အပြစ်မရှိတဲ့ ကလေး ထောင်ကျသွားတာလား..?
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဟာ သရဲနဲ့ သွေးစွန်းဓားအကြောင်း လျှို့ဝှက်ထားလိုက်တယ်။
ဒီ လျှို ့ဝှက်ချက်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ စကားများလာတယ်။
" ရဲတိုင် ရမယ်..."
"သူငယ်ချင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်မို့ ရဲ မတိုင်သင့်ဘူး.."
အင်မ် နဲ့ ကင်မ် ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များနေတယ်ဆိုပြီး စိတ္တဇဆေးရုံမှာ တစ်လ ဆေးကုသမှုကို ခံယူလိုက်တယ်။
အကယ်၍များ အဖမ်းခံရရင် အရူးလက်မှတ်နဲ့ လျှော့ပေါ့ခွင့်များ ရမလားပေါ့..။
စိတ္တဇဆေးရုံမှာလည်း အရက်ခိုးသောက်၊ ဆရာဝန် ရှေ့ရောက်ရင် တစ်ယောက်တည်း စကားတွေပြော ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေကြတယ်။
ပြီးတော့ ကင်မ်ဟာ ပုံမှန်ပဲ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ကင်းမဲ့စွာ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတယ်။
ဒါပေမဲ့ အင်မ်တစ်ယောက်ကတော့ ဂနာမငြိမ်...။
ကင်မ်ကတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်ကို မေ့သွားပြီလား? ...။
သူငယ်ချင်းတွေဟာ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို အမြဲ အကဲခတ်နေကြတာပေါ့။
သူတို့ပြောတဲ့ အတိုင်းသာမှန်ရင် ကင်မ် က လူသတ်မှု၊ အင်မ် က လူသတ်မှုကို ထိန်ချန်တဲ့ အမှု...။
ဒီလိုနဲ့ ၃ နှစ် ကြာသွားတယ်။
ဒီသတင်းဟာ တစ်ယောက်နား တစ်ယောက် ပျံ့ပြီး ရဲစခန်းအထိ ရောက်သွားပါလေရော..။
ဒါကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၆ လပိုင်းမှာ ရဲစခန်းက အင်မ် ကို အရင် ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်။
" ဒီ သတင်းကို မင်းဆီကကြားတယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်နေတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောပြပါ.."
အင်မ် က သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြတဲ့အတိုင်း ကင်မ် ရဲ ့လျှို ့ဝှက်ချက်ကို ရဲအရာရှိထံ အကုန်ပြောပြလိုက်တော့ တယ်။
" ကင်မ် က ပထမ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာရဲ့ လည်ပင်းကို လည်း ဓားနဲ့ ထိုးတယ်တဲ့ဗျ...ပြီးတော့ ဘယ်နေရာကို ဆက်ပြီး ဓားနဲ့ထိုးခဲ့လဲ မမှတ်မိတော့ဘူးလို့ ပြောတာပဲ.."
" တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာက ကယ်ကြပါဦးလို ့အော်ပြီး ကားထဲက ဆင်းပြေးတယ်တဲ့ဗျ...ဒါကြောင့် ကင်မ် က အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် အိမ်ကို ပြေးလာခဲ့တာပါ.."
" ဓားမှာ သွေးတွေပေနေတယ်။ သွေးတွေထက်စာရင် ဝက်သား အဆီတွေလို အဆီခဲတွေက အဖတ်လိုက်.. အဆီတွေက ပိုများတယ်။ ဓားက နည်းနည်းကောက်နေတယ်..။ ကင်မ် က ဒီလိုပြောတယ်။ ဓားက အရိုးအထိ ဝင်သွားလို့ နည်းနည်း ကောက်သွားတယ်တဲ့။"
ရဲတပ်ဖွဲ့က ကင်မ် ကို ဆက်လက်စစ်ဆေးတယ်။ ကင်မ် က ပထမတော့ ငြင်းသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း အင်မ် က အားလုံးပြောပြီးပြီလို့ အမှုစစ်က ပြောပြတော့ သူ့အပြစ်တွေ အားလုံးကို ဝန်ခံခဲ့တယ်။
" ပထမတော့ တက္ကစီဖိုး မရှိလို့ပါ။ ကျွန်တော် တက္ကစီဖိုးမရှိဘူးပြောရင် ဦးလေးကြီက ရဲတိုင်မှာစိုးလို့ ဓားပြယောင်ဆောင်မယ်လို့ တွေးမိလိုက်တယ်။ တက္ကစီ ဦးလေးကြီးက ထွက်ပြေးမယ်လုပ်တော့ ဓားနဲ့ထိုးမိပြီး ကျန်ငွေတွေပါ ယူပြီး ပြေးမိပါတယ်.."
" အဲဒီ ဓားရော ဘယ်ရောက်သွားလဲ...?"
" အင်မ် ဆီမှာ အပ်ထားပြီး နောက်တော့ *** ရပ်ကွက်က အိမ်ပျက်ကြီးနားမှာ မြုှတ် ခဲ့တယ်..."
ရဲတပ်ဖွဲ့က ကင်မ် နဲ့ အင်မ် ကို ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။
အမှုအားလုံး စစ်ပြီးတော့ ကင်မ် ရဲ့ နောက်ဆုံးရေးတင်ခဲ့တဲ့စာ...
ကျွန်တော့်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့သူတွေကို အနူးအညွွှတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အတော် စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်သွားတာကြောင့် ကျွန်တော် စိတ်ထိခိုက်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီစကားကလွဲပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကို အပြစ်ပေးပါ။ ကျွန်တော်ဟာ ပထမ အစ ကတည်းက ဒီကိစ္စကို အကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပေမယ့် ရဲကို တိုက်ရိုက် အကြောင်းမကြားခဲ့မိတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကို အပြစ်ပေးပါ။
ဒါပေမဲ့ ကင်မ် နဲ့ အင်မ် ဟာ ၂ ရက် ပဲ အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်လာတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က တင်တဲ့ ကင်မ် နဲ့ အင်မ် အမှုကို သက်သေမရှိတော့လို့ ဆိုပြီး ထောက်လှမ်းရေးဘက်က ပယ်ချလိုက်လို့ပါပဲ။
သက်သေ အသစ်တွေ လိုအပ်တဲ့အတွက် သူတို့နှစ်ယောက် ကို ပြန်ဖမ်းပြီးမေးတော့ ကင်မ်နဲ့ အင်မ်ရဲ့ အဖြေတွေက ပြောင်းကုန်ပြီ။
" သူငယ်ချင်းတွေကြား တမင်သက်သက် ဒီသတင်းပျံ့အောင် ဇာတ်လမ်းထွင်ပြီး ပြောတာပါခင်ဗျ" လို့ ဖြေတော့တယ်။
" ဟုတ်ပါတယ်...ကျွန်တော်တို့ လူတောင် သတ်ရဲတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေ အထင်ကြီးမယ်လို့ ထင်မိတယ်..."
" အဲဒီ ၂၀၀၃ နှစ် တုန်းက ကျွန်တော့် အမေနဲ့အဖေ ကွာရှင်းကြတယ်။ ဒါကြောင့် အမေနဲ့အဖေ ကျွန်တော့်ကို ဂရုစိုက်အောင် ဇာတ်လမ်းထွင်မိတာပါ..."
"မိဘတွေ စိတ်သောကရောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် လူသတ်တာလို့ ရဲစခန်းမှာ ဖြေခဲ့တာပါ.."
" ဟာ.. တော်တော်ရှုပ်တဲ့ ကောင်လေးတွေ.."
" အင်မ်... မင်းကိုယ်တိုင် သွေးစွန်းနေတဲ့ ဓားကိုတွေ့ခဲ့တာဆို..."
"မတွေ့ပါဘူးဗျာ... စိတ်ကူးယဉ်တာပါ...သူငယ်ချင်းတွေကို ဆေးအနီ သုတ်ထားတဲ့ ဓားကို ပြခဲ့တာပါ..."
" ပထမအကြိမ် ကင်မ် နဲ ့အင်မ် ကို စစ်ဆေးတုန်းက ကင်မ် ဟာ လူသတ်မိပါတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန် သူတို့ မျက်နှာတွေဟာ မလိမ် မညာ အမှန်အတိုင်း ပြောနေတယ်လို့ ယူဆရတယ်။သူတို့က ကြောက်နေပုံလည်းရတယ်။ ဝမ်းနည်းပုံလည်းပေါက်နေတယ်။"
" အဲ...ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ လူမသတ်ပါဘူး ၊ဇာတ်လမ်းထွင်မိပါတယ် ဘာညာနဲ့ သူတို့ သတိထားပြီး ပြောနေတယ်။ လိမ်တာဖြစ်ဖို့များတယ်..။ သူတို့ မျက်နှာက မထီမဲ့မြင်နဲ့ .."
ရဲတပ်ဖွဲ့က ကင်မ် ဓားလွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့နေရာကို လိုက်ရှာကြပြန်တယ်။
အဲဒီမှာ အိမ်အသစ် ဆောက်ထားပြီ..။
" ဟုတ်တယ်ဗျ... အိမ် စ ဆောက်တုန်းက သံချေးတက်နေတဲ့ ဓားတစ်လက် မြေကြီးထဲက ထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်..."
“. အာ.. အဲဒီဓားက အောက်ပိုင်းမှာ သံချေးတက်နေတယ်။ဓား က နည်းနည်း ကောက်နေတယ်ရှင့် .." လို့ အိမ်ရှင်လင်မယားက ပြောခဲ့တယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ က အဲဒီအမှုကို အမှိုက်ပုံမှာ ဆက်ရှာဖို့ ခွင့်ပြူချက်ယူရမှာဖြစ်တယ်။
အမှု ဆက်စစ်ဖို့ အဲဒီဓားကို ရှာဖို့ အထက်ကို တင်ပြရပြန်တယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ ့အထက်က ထောက်လှမ်းရေးပေါ့။
" ဒီလောက်ကြာနေပြီ။ DNA လည်း စစ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး.." တဲ့..။
ကင်မ် နဲ့ အင်မ် ဟာ အမှုကနေ ဒီလို လွယ်လွယ်လေး လွတ်မြောက်သွားပြန်တယ်။
အခြားတစ်ယောက်ကို ဖမ်းထားပြီးပြီမို့ သူတို့ အလုပ်မရှုပ် ချင်တော့..။
မှားပါတယ်ဆိုပြီး တရားခံအစစ်ကို ပြန်ဖမ်းဖို့ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စ အချိန် စသဖြင့်နည်းတဲ့ အလုပ်တွေ မဟုတ်ဘူးလေ။
အပြစ်မဲ့ လုလင်တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာ သူတို့ အလုပ်ရှုပ်တာထက် ပိုပြီး အရေးမကြီးဘူးလေ...။
အကယ်၍ အမှုပြန်ဖွင့်ရင် အပြစ်မဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဘဝကို ဖျက်မိတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိကစပြီး တရားသူကြီးအထိ ပြဿနာတွေ တက်မယ်လေ။
သူတို့ မဟုတ်တာတွေလုပ်ထားတာ အကုန်ပေါ်မယ်။
သူတို့ ဒါတွေကို မလိုချင်..။
ဒီလိုနဲ့ ၁၅ နှစ် ကြာသွားတယ်။
လျှို ့ဝှက်ချက်ဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပိုပြီးပေါက်ကြားလာတယ်။ ပေါက်ကြားတာမှ SBS ရုပ်မြင်သံကြားအထိကို ပေါက်ကြားသွားတယ်။
ဒီလျှို ့ဝှက်ချက်ဟာ သူတို့နေတဲ့ ဂျော်လဒို- အိခ်ဆန်မြို့လေး ( Iksan City - North Jeolla Province, South Korea) မှာ ဒီ လျှို ့ဝှက်ချက်ရဲ့ တီးတိုးသံတွေ ထွက်နေတာ ၁၅ နှစ် ရှိပြီပေါ့ ။
ကင်မ် နဲ့ အင်မ် ရွယ်တူ ၁၉၈၁ ခုနှစ် မွေးတဲ့ သူတွေဆို အကုန်နီးပါးသိနေကြပြီ။
“ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရဲ့ လျှို ့ဝှက်ချက် နဲ့ သရဲခြောက်တဲ့ ကုတင် “ အကြောင်းဟာ လျှို ့ဝှက်ချက်တစ်ခုကနေ ကောလဟလ သတင်းတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပြီ။
ပြီးတော့ တစ်ချို့ သူငယ်ချင်းတွေဆို အင်မ် နဲ့ ကင်မ် ကို ငယ်သူငယ်ချင်း စာရင်းက ပယ် ဖျက်လိုက်ကြပြီ။
လူသတ်သမား၊ လူယုတ်မာ၊ ကလိမ် ကကျစ် နှစ်ယောက်...။
ဘဝ မှာ ဘာမှ အပြစ်မလုပ်တဲ့ သူကတော့
" ကျွန်တော် လူမသတ်ပါဘူး" လို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန် ပြောဆိုလည်း လက်လွတ်စပယ် တာဝန်ကျေ လုပ်သူတို့ကြောင့် ဘဝတစ်ခုလုံး ပေးဆပ်လိုက်ရသလို...
" လူသတ်မိတယ်ဗျာ..." ပြောလည်း အမှုပြန်ဖွင့်ရမှာ အလုပ်ရှုပ်လို့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အဖြစ်...။
ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ လောကကြီးမှာ အများကြီးရှိနေတယ်။
တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လူ့ဘဝကို ထောင်ထဲမှာ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အပြစ်မဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို စာနာစိတ်မထားနိုင်ကြ..။
ဒါဆို အပြစ်မဲ့တဲ့ လုလင်ဟာ ဘာလို့ အဖမ်းခံခဲ့ရသလဲ... ဘာလို့ တရားခံလို့ အစွပ်စွဲခံခဲ့ရသလဲ...?
၂၀၀၀ ခုနှစ် မှာ အသက် ၁၅ နှစ်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားလေးဟာ လူသတ်မှုနဲ့ထောင်ကျခဲ့တယ်။
သူ့ နာမည်က ချွဲ** တဲ့။
" ကျွန်တော် အမြဲစဉ်းစားမိတယ်။ ငါ ဘာလို့ ထောင်ကျပါလိမ့်.. လို့၊ တွေးလို့ကို မရတာ။ ကျွန်တော် စိတ်နာတာ ရဲတွေကိုပဲပေါ့.." လို့ သူ က ပြောတယ်။
ချွဲတို့ မိသားစုက ဆင်းရဲတယ်။ ငွေမရှိ ၊ အနောက်က ပံ့ပိုးမယ့်သူမရှိလေတော့ အာဏာပိုင်တို့ ထင်ရာစိုင်းရဲကြတာပေါ့။
ချွဲက အဲဒီနေ့က အကြောင်းကို ပြောပြတယ်။
အဲဒီနေ့က ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ကော်ဖီ ပို့တဲ့ အချိန်ပိုင်း အလုပ် လုပ်နေတဲ့နေ့ပေါ့။
တက္ကစီ တစ်စီးရပ်ထားပြီး ရဲကားတွေရော ရဲတွေရော လမ်းပေါ်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်။
ရဲတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ အသိ ဦးလေးရဲကြီး တစ်ယောက်ပါနေတယ်။
သူတို့က တစ်ခုခုကို လိုက်ရှာနေတယ်။
ကျွန်တော် အသိဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းပန်းတသာ နှုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့။
" ဓား တစ်ချောင်းလိုက်ရှာနေတာ ကျောင်းသားလေးရေ.."
" ဘာ ဓားလဲ ဦးလေး"
" တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာကို လူသတ်သမားက ဓားနဲ့ထိုးလိုက်တာလေ။ အဲဒီဓားကို လိုက်ရှာနေတာ ချွဲ ရေ.."
" ဟာ ဟုတ်လား ဦးလေး.., ဟိုဘက်ကို လူနှစ်ယောက် ပြေးသွားတာ ကျွန်တော် တွေ့တယ်ဗျ.. နှစ်ယောက်ဗျ .. တစ်ယောက်တည်း တော့ မဟုတ်ဘူး "
ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့ ထွက်လာခဲ့တယ်။
ရဲတွေက ကျွန်တော် နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဗျ.. ။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမပြောပဲ အလုပ်နောက်ကျမှာစိုးလို့ ဆိုင်ကယ်ဆက်မောင်းထွက်သွား လိ်ုက်တယ်။
နောက်တစ်နေ့ကျတော့ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို လာဖမ်းတာပဲ။
" မင်းဟာ တက္ကစီသမား နဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး တက္ကစီသမားကို ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တယ်"
ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော့် ဆိုင်ကယ်ထဲမှာ ဓားတစ်ချောင်းရှိတယ်။ လိုရမယ်ရ အန္တရယ်ရှိခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဆောင်ထားခဲ့တာ။
အဲဒီ ဓားနဲ့ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာရဲ့ ဓားဒါဏ်ရာ စစ်ချက်တွေထဲက ဓားနဲ့ က တစ်ခြားစီ..။
ရဲတွေက ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆိုင်က ဓားတွေ ပျောက် ၊ မ ပျောက် လာစစ်တယ်။ကော်ဖီဆိုင်ဆိုတော့ ဓားက တစ်ချောင်းပဲရှိတာ..။ ဓားက ရှိနေတာပေါ့..။
ကျွန်တော့် ကိုယ်မှာရော ၊ ဆိုင်ကယ်ထဲက ဓားမှာရော တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာရဲ့ သွေး DNA တစ်စက်လေးမှ မရှိပါဘူး။
သွေးစွန်းတဲ့ နေရာ ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်လုပ် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းနဲ့ စမ်းသပ် လို ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ မစမ်းသပ်ဘူး။
" တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာက ကားထဲကထွက်လာပြီး အော်တယ်။ လူတစ်ယောက်က တစ်ဖက်ကို ထွက်ပြေးတယ်။ နောက် ၂၀ မိနစ် လောက်ကြာမှ ကော်ဖီပို့တဲ့ ကောင်လေးဆိုင်ကယ်နဲ့ ရောက်လာတယ်"
" မင်း တရားခံ" ပဲ...တဲ့ဗျာ။
ကျွန်တော့် ကို အခန်းပိတ်ရိုက်ပြီး ဝန်ခံခိုင်းတယ်။
အိပ်လည်း မအိပ်ခိုင်းပဲ သေအောင် ရိုက်ကြတာဗျ..ကျွန်တော် အရမ်း ကြောက်လာတယ်။
ကျွန်တော် လူသတ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ရတယ်။ မပြောမချင်း သံချောင်းနဲ့ကို ရိုက်တာဗျ..။
တရားသူကြီးက ကျွန်တော် အသက်မပြည့်သေးလို့ဆိုပြီး တစ်သက်တစ်ကျွန်းတော့ ထောင်မချနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့။ လူသတ်မှုနဲ့ ထောင် ၁၅ နှစ် အမိန့်ကျခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်အမေက ဒုတိယ တရားရုံးတက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို အယူခံဝင်ဖို့ ကူညီတယ်။
ဒါကြောင့် ထောင်ဒါဏ် ၅ နှစ်ပေါ့လျှော့ပြီး ထောင် ၁၀ နှစ်ကျသွားတယ်။
"ကျွန်မ သားလေး အချုပ်ထဲမှာရှိနေတုန်း တစ်ခါပဲတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကျွန်မ သားနဲ့တွေ့ပြီး လှည့်အပြန် သားလေးရဲ့ ငိုသံကြားလိုက်ရတယ်။"
ထောက်လှမ်းရေးတွေက နောက်ထပ် ကျွန်မကို အလာမခံတော့ဘူး။
ချွဲဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ချွဲ လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်.. ။
ဘဝမှာ စာလည်း သင်ခွင့်မရခဲ့တော့..။
သူတတ်လာတာ အဆဲအဆို၊ အားနည်းသူတွေကို အနိုင်ကျင့် ၊ အားကြီးတဲ့သူတွေဆီ ကျွန်ခံ...။
ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန် ၁၀ နှစ် ...ငရဲပြည်လို ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ရပြီ။
မြေနှိမ့်ရာ လှံစိုက်ကြတဲ့ လူယုတ်မာတွေကြောင့် ဘဝရဲ့ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေမှာ ချွဲတစ်ယောက်တော့ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင် ဒါဏ်...။
ဘဝမှာ " ထောင်ထွက် " ဆိုတဲ့ နာမည်ဆိုး ကြောင့် အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လည်း မလွယ်တော့။
ဒါကြောင့် ချွဲ ဟာ သူ အပြစ်မရှိကြောင်း၊ သူ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှာ ထောင်ထွက်ဆိုတာ ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ စာတင်ခဲ့တယ်။
၂၀၁၅ မှာ SBS ရုပ်မြင်သံကြားက ဒီအကြောင်းကို ကြေငြာပြီး အစွမ်းကုန်ကူညီခဲ့တယ်။
လူသတ်မှုက ၁၅ နှစ်ကျော်သွားရင် ဥပဒေအရ အမှုပြန်လည်စစ်ဆေးဘို့ မလွယ်တော့ဘူးလေ။
သနားစရာ ချွဲရဲ့ ဒီ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းကို New Trial (재심 ) ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ရုပ်ရှင်ကားပြန်ရိုက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကို သိစေခဲ့တယ်။
ဒီလို SBS ရုပ်မြင်သံကြားက ကူညီခဲ့ပြီး
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၆ လပိုင်း ၂၂ ရက်နေ့မှာ ချွဲဟာ အမှုပြန်ဖွင့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ ဒါရိုက်တာ ကင်မ်ထဲယွန်း (김태윤) ရိုက်တဲ့ New Trial ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာရိုက်ခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက အမှုက အသစ်ပြန်ဖွင့်ရုံပဲရှိသေးတာပေါ့။
ဒီလို တစ်နိုင်ငံလုံးသိပြီးမှ စည်းလုံးလာတော့မှ တကယ့်အဖြေဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ၂၇ ရက်နေ့မှ အပြီးသတ်ထွက်ခဲ့တယ်။
ကင်မ် နဲ့ အင်မ် ရော အခု ဘယ်ဘဝ ရောက်နေပြီး ဘယ်လို အပြီးသတ်ခဲ့သလဲ ...?
ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၁၁ လပိုင်း ၁၇ ရက်နေ့မှာ တရားသူကြီးဆီက ချွဲဟာ အပြစ်လုံးဝမရှိကြောင်း အမိန့်ကျခဲ့တယ်။
သူ့ရဲ့ ရာဇဝတ်မှု သမိုင်းဟာ ပြန်ပြီး ဖြူစင်ခဲ့တာပေါ့။ နစ်နာကြေးကိုလည်း နိ်ုင်ငံတော်ကပေးခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေကို ငွေနဲ့ပေးဝယ်လို့ မရဘူးလေ။
သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ညီအစ် ကို အရင်းတွေထက်တောင် ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။
အင်မ် ဟာ ဒီကိစ္စကို အစ ပထမ ကတည်းက ရဲကို တိုင်ချင်ခဲ့ပေမယ့် သူငယ်ချင်းကြောင့် တွေဝေခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် အင်မ်ဟာ ရဲတွေသိအောင် တမင်သက်သက် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တာပါတဲ့..။
နောက်ပိုင်း တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာ သရဲကြီးက အင်မ် အိပ်မက်ထဲကို နေ့တိုင်း လာခဲ့တယ်။
အင်မ် နောင်တရတယ်။ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာကြီးကို သနားတယ်။ ထောင်ကျခဲ့တဲ့ ချွဲ ဆိုတဲ့ ကောင်လေးအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဘူး။
အင်မ် ဟာ သူ့ အပြစ်အတွက် သူ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်လာတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ အခန်းတံခါး တွေကို ပြူတင်းပေါက်တွေကို တိပ်နဲ့ အသေ ပိတ်ပြီး ကျောက်မီးသွေးဖိုတွေ မီးရှှို ခဲ့တယ်။ ကာဗွန် အဆိပ်ငွေ့တွေ ရှူရင်း မိမိကိုယ် မိမိသတ်သေလိုက်တော့တယ်။
အင်မ် အသုဘကို ကင်မ် နဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးလာကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေဟာ ကင်မ် ရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်တောင် မကြည့်ကြဘူး။
ကင်မ် ဟာ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာကိုပဲ သတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကိုလည်း သေစေခဲ့လေပြီ။
ကင်မ်ဟာ အမှန်တရားကို ရှောင်လွဲလို့မရဘူးဆိုတာ သိခဲ့ရပြီ။
ပြည်သူတို့ရဲ့ မဟုတ်မခံမှု၊စည်းလုံးမှုနဲ့ ကူညီမှုတွေကြောင့် ကင်မ်ကို ပြန်ပြီး အမှုဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်လေ... ။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ၂၇ ရက်နေ့မှာ ကင်မ်ကို ထောင် ၁၅ နှစ်ကျခံစေလို့ တရားသူကြီးက အမိန့်ကျခဲ့တယ်။
အခုတော့ ကင်မ်ထောင်ထဲမှာ သူ့အပြစ်တွေအတွက် ပေးဆပ်နေရပြီ... ။ သူငယ်ချင်း အင်မ်ကို သတိရလွမ်းဆွတ်ရင်းပေါ့။
အားလုံး နစ်နာပြီး ကြေကွဲဖို့ကောင်းတဲ့ တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အမှုတစ်ခု ဖြစ်လာရင် တစ်ကယ့် လူသတ်သမားကို ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမှာ ခက်ခဲတဲ့အတွက်... ပြီးရင်ပြီးရောဆိုပြီး ဘဝတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ ဒီလို အဖြစ်မျိုးဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ တောင်ကိုရီးယားလို နိုင်ငံတွေမှာတောင် ရှိနေတယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လောက်တောင် ရှိနေပြီလဲ...။
တစ်ချို့ လူတွေဟာ စာနာစိတ် မရှိကြဘူး..။
ပြီးတော့ မြေနှိမ့်ရာ လှံစိုက်ကြတယ်လေ။